Khatarta caafimaad ee calool istaagga iyo sida looga hortaggi karo (WQ: Kamaal Axmed Cali) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Khatarta caafimaad ee calool istaagga iyo sida looga hortaggi karo (WQ: Kamaal Axmed Cali)
Calool istaagga joogtada noqdaa waxa uu keenaa khataro caafimaad oo badan. Waxaa ka mid ah in qofku uu yeesho babaasiir, in qayb ka mid ah dhuunta saxaradu soo marto ee xagga dambe ay dibadda u soo dhaafto daloolka, in saxarada caloosha ku ururaysaa ay mar kasta sii adkaato illaa ay gaadho heer aanay midhiciradu si dabiici ah u soo saari karin, xitaa haddii dawooyinka calool socodsiinta la isticmaalo. Taas oo mararka qaarkood gaadha heer ay qasab noqoto in qofka qalniin lagu sameeyo, si saxaradaas bannaanka loogu soo saaro.
1. Dhaqdhaqaaqa jidhka iyo jimicsiga ku dadaal, tusaale ahaan jimicsiga socodka ah, danahaaga aad dhaqso u gaadhi kartana u lugee oo gaadhiga ha raacin.
2. Cunto isu dheellitiran cun, gaar ahaan cunto ay ku badan tahay noocyada khudradda, oo ay ka mid tahay khudradda cagaaran, khudradda midhaha ah iyo cuntada galka leh.
3. Waxaa dadka qaar ku dhacda marka ay si kedis ah u beddelaan nooca cunto ee ay isticmaali jireen, in ay isku arkaan dibbiro iyo naqas badan oo caloosha buuxiya, sidaa awgeed waxaa muhiim ah in qofku uu dhakhtar la tashado iyo in uu si tartiib-tartiib ah ugu guuro cuntada cusub.
4. Maalin kasta cab ugu yaraan 8 koob oo biyo ah. haddii aad jimicsi samayso ama aad ku nooshahay deegaan uu heerkulkiisu sarreeyo waxa aad u baahantahay in aad biyo intaas ka badan cabto.
5. Haddii aad cunto gal leh isticmaasho oo aanad biyo badan raacin, waxaa dhici karta in ay calool istaagga sii badiso, ama ugu yaraan waxba ka tari weydo.
6. Marka aad xamaamka u baahato dhaqso u tag, oo muddo ha ka sii mashquulin, waayo xijisashada kaadida iyo saxaradu waxa ay dhaawac gaadhsiiyaan quruxda jidhkiisa iyo muuqaalka duleed ee qofka, waxa kale oo uu khatar ku keenaa caafimaadka.
7. Haddii calool istaaggaaga uu ku lammaan yahay calool xanuun, saxarada oo uu dhiig soo raacayo ama shuban kedis ah oo haddana mar kale calool istaaggu halkiisii ka sii socdo, ama ay calooshu muddo dheer ku taagnayd, waxaa waajib kugu ah in aad dhaqso dhakhtar ugu tagto.